အခန်းကြီး/ငယ်ကို မည်သည့်အချိန်ခွဲခဲ့သနည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home ကျမ်းစာ လေ့လာခြင်း အခန်းကြီး/ငယ်ကို မည်သည့်အချိန်ခွဲခဲ့သနည်း
Samuel Soe lwin 7:01:00 AM ကျမ်းစာ, လေ့လာခြင်း,
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရေးသားရာတွင် မူရင်းကျမ်းစာ၌ လုံးဝအခန်းကြီး၊ အခန်းငယ်တို့မပါရှိခဲ့ပါ။ နှုတ်ကပတ်တော် ကိုဖတ်ရှုရာတွင် အားလုံးလွယ်ကူစွာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်နှင့် လွယ်ကွာစွာရှာဖွေ တွေ့နိုင်ကြစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အထောက်ကူပြုနိုင်စေရန် ထိုသို့ အခန်းကြီး၊ အခန်းငယ်စသဖြင့် ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်.... “ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသား တို့ကို ချစ် တော်မူ၏” ဟူ၍ရှာဖွေရခြင်းထက် “ယော၊ ၃:၁၆ ကိုရှာဖွေရခြင်းသည် ပိုမို၍မြန်ဆန်ပြီး လွယ်ကူလှသည် မဟုတ် ပါလား။ ထိုသို့ဖြင့် အခန်းကြီး၊ အခန်းငယ်အလိုက် ခွဲခြမ်းပေးထားခြင်းဖြင့် ရှာဖွေရခြင်းမှာ လွယ်ကူ သည့် နည်းတူ အတူတကွဖတ်ရှုရာတွင်လည်း လွယ်ကူလျင်မြန်စေပါသည်။
၂။ မည်သူ့အားဖြင့် ပြုခဲ့သနည်း။
လက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သော အခန်းကြီးများကို အစပြုလျက် အားလုံးအဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူမှာ Canterbury မှ ဘီးရှော့ပ် Stephen Langton ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အခန်းကြီးအလိုက်ခွဲခြားပေးမှုကို အေဒီ၊ ၁၂၂၇ ခုနှစ်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ပထမဦးဆုံးသော အခန်းကြီး ကျမ်းစာအုပ်အမျိုးအစားမှာ Wycliffe English Bible (1382) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ Wycliffe English Bible ကိုအခန်းကြီးခွဲပြီးနောက်တွင်ကား အခြားသော ကျမ်းစာမူကွဲများ တွင်လည်း ထိုသို့ ပင် ထပ်တူလုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။
၃။ မူရင်း ဟေဗြဲကျမ်းစာ။
ဓမ္မဟောင်းမူရင်းကျမ်းစာအရေးအသားဖြစ်သော ဟေဗြဲကျမ်းစာကိုကား အခန်းငယ်အလိုက်ခွဲခြားမှုကို ဂျူးဆရာကြီး Nathan မှ အေဒီ၊ ၁၄၄၈ ခုနှစ်တွင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့အတူ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကိုမူကား အားလုံးသိထားကြသည့် Stephanus ဟုလူသိများခဲ့သော Robert Estienne မှ အေဒီ၊ ၁၅၅၅ ခုနှစ်တွင် အခန်းကြီး၊ အခန်းငယ်စသည်ဖြင့် ခွဲပေးခဲ့သည်။ ထို့အတူ ယနေ့ဓမ္မဟောင်းနှင့် စပ်ဆိုင် လာလျင်လည်း ဓမ္မဟောင်းကိုပင်လျင် ထိုသို့ပြုခဲ့သောကြောင့် Nathan မူရင်းကျမ်းစာဟုပင် လူသိများ ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်မှစတင်ပြီး Geneva Bible တွင် အခန်းကြီး၊ အခန်းငယ်စသည်ဖြင့် ခွဲခြားအသုံးပြုလာကြပြီးလျင် Stephanus ၏လုပ်ဆောင်မှုကို အများစုကလက်ခံလာကြပြီး ကျမ်းစာအားလုံးနီးနီးတွင် လက်ခံအသုံးပြုလာခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ Who divided the Bible into chapters and verses? Why and when was it done? အားမြန်မာမူပြုပါသည်။